Ciidamada Jubbaland oo hor istaagay in soo dhoweyn loo sameeyo xildhibaan ka tirsan Barlamanka Somalia. | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ciidamada Jubbaland oo hor istaagay in soo dhoweyn loo sameeyo xildhibaan ka tirsan Barlamanka Somalia.
Wararka laga helayo magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in Ciidamada amniga maamulka Jubbaland ay Garoonka Diyaaradaha Kismaayo ay u diideen Garoonka inay galaan masuuliyiin & Dad shacab ah oo halkaasi u tegay inay soo dhoweeyaan Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Somalia.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland ay garaaceen qaar ka mid ahaa dadkii shacabka ahaa iyo Saxafiyiina tegay Garoonka, iyadoo saxafiyiinta laga jajebiyey qalabkii ay wateen.
Dadka tacadiga lagula kacay ayaa doonayey inay soo dhoweeyaan Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xiddig. Waxayna ciidamada Jubbaland u diideen dad shacabka ah & masuuliyiinttii halkaasi u tegay soo dhoweynta xildhibaan Xiddih inay gudaha u galaan Garoonka.
Xalay ayay ahayd markii Golaha amniga Jubbaland ay soo saareen go’aanno culus oo ku saabsan ololaha doorashada maamulkasi iyo dadka dibadda uga imaanaya magaalada Kismaayo.
Previous articleMashaariicdii ee Ururka Iskaashiga Islaamka (IOC) ee Somalia lagu musuqmaasuqay. [Galka Baarista]
Next articlePakistan oo soo Bandhigtay Duuliyihii Diyaaradiisa lasoo riday & India oo Qiratay diyaarad ka maqan [Sawirro]